Aqoonta iyo qabyaaladduu Soomaalidu miyay isla qabsadeen? | Somali - Diaspora
Aqoonta iyo qabyaaladduu Soomaalidu miyay isla qabsadeen?
Thursday, September 27, 2012 (Moment Media Group) -Dadka yaqaanna culuunta barashada iyo la tacaallida ili-ma aragtida ee loo yaqaanno microbiology waxay sheegaan in ili-ma aragtida lagula dagaallami karo dawooyinka lagula tacaalo caabuqa ee loo yaqaanno Antibiotics-ka, hadii uu VIRUS yahayna dawo malaha lkn TALLAAL iyo ka hortag ayaa loogu roonaadaa.
QABALI qaaddo kuma lehe, Qoomyohow is daba qabo…!!
Comment by somaliamomentum on September 27, 2012 2:18 pm
Xaq ma ahan ee waa Xal” maku imaan karaa Xalka Soomaaliya.
Madaxda qabqablayaasha beelaha hubeeysan weli ay maskaxdoodi ka bixin habkaasi, waxaan u sheegayaa marka hore in DHUL DADKIISA ISKA LEH, waxaana leeyahay ka fiirsada waxaad damceeysaan iyo dhulalka sheeganaysaanba, sababtoo ah, Soomaaliya manta dhibaatada ugu weyn ee haysata waa dhul kala haysasho, dowlad Soomaali ahne u dhismi la’dahay in ka badan 20 (labaatan) sano, sidaas darteed beel kastaba haku ekaadaan dhulkoodi ee yeeysaan damcin dhul aan isir iyo assalba u lahayn.
Badbaadinta dhismaha dowladda Soomaaliya waa in loo maraa waddo ku dhisan caddaalad ” SINNAAN IYO CADDAALAD WAA AASAAKA DOWLADNIMADA ” ee yaan lala aadin dulmi ama dano qabiil.
Awood qaybsiga habka 4.5ka ma aha mid ku qotoma caddaaladda iyo sinnaanta, wuxuuna ka soo hor’jeedaa: dhaqanka hiddaha Soomaaliyeed, maxaa yeelay beelaha Soomaaliyeed tiro ahaan aysan isla ekeyn, deegaan ahaanne ay ku kala weynyihiin ; beelaha xaqoodi nus laga dhigay laga yaabo in ay ka tiro badan yihiin beelahaas qaarkoodi ay isku tiriyaan beelaha waaweyn.
Waxaa yaabka yaabkiisa ah in madaxdii hore ee maxaakiimta oo maantane qaarkoodi madax kayihiin dowladda ee Soomaaliya in ay ku doodi jireen habka 4.5ka inay tahay xaaraan, caddaalad darro marka loo fiiriyo dhankastaba, xagga diinta Islaamkuna iyo dhanka bulshada soomaaliyeedna ay dulmi tahay in beelaha hubeeysan laga sareeysiiyo beelaha aan hubaysneeyn ee aan dhibka geeysan, maantane nidaamkaasi ay wataan madaxdaasi.
Madaxweenihii hore Sh. Shariif Sheekh Axmed markii la weeydiiyey sababta ay u hir’galinayaan nidaamkaasi? waxay ku jawaabeen: xaq looma baahnee xal baa loo baahanyahay iyagoo qarinaya xaqa, baadilkana lagu dhaqmo, taasoo ka soo wada hor’jeeda beelaha aan hubeesneeyn.
Ilaa iyo maanta mala yaqaan habka xaqdarrada ah ee nidaamka 4.5ka meesha laga keenay, mana qabo dhaqanka Soomaalida, sidoo kale xittaa Sharciga Caalamka iyo Shareecada Islaamkaba.
Haddii aan laga hor’tagin nidaamkaasi lagu qeeybin doono: xildhibaanada iyo wasiirada wuxuu u sii gudbidoonaa: agaasimayaasha guud ee wasaaradaha, taliyeyaasha militariga iyo boliiska, safiirada iyo qunsuliyiinta wakiil inooga noqon doona dowladaha caalamka iyo wixii la mid ahba iyadoo loo eegeeynin aqoonta iyo xirfadda aay leeyihiin ee lagu magacaabidoono kaliya nidaamka xaaraanta ee 4.5ka oo ah sunta ku dhex saaqan madaxda beelaha hubeeysan oo loo baahan yahay in loo helo daawo aay ku caafimaadaan.
Xisbigaasi baaqiisu wuxuu ahaa: ” AXYAA WADDANI, SOOMALIYEEY TOOSOOY IYO QABIIL QARAN MA DHISO ”.
Dastuurka xisbigaasi waxaa ugu waaweeynaa kana mid ahaa: in dalka lagu hoggaamiyo diinta iyo shareecadda islaamka, in la cirib tiro dhaqamada xun-xun
oo aay ka mid yihiin: qabiilka iyo qabyaaladda iyo is quursiga, in la hor’mariyo aqoonta, hiddaha iyo dhaqanka fiican.
Haddaba, madaxda qabqablayaasha beelaha hubeeysan waxaan la talinayaa inta aay fal ku kicin ama suubin sida nidaamka 4.5ka in ugu horreeyntii iney xog’ogaal u noqdaan taariikhda beelaha Soomaalida khaas ahaan taariikhda dhabta ah ee qoreyaasha caalamka ay ka qoreen Qoowmiyadda Banaadiri, qoraaladaas aad ka heli kartaan bibliyooteegyada waaweyn ee caalamka, ” AQOON LA’AAN WAA IFTIIN LA’AAN”, ” GADAAL KA GAAR WAA GOOB DUMIS ”, sababtoo ah muwaadhiniin ay u soo halgameeyn xor’nimada Soomaaliya maantane awood qeeybsiga lagu sheegaayo OTHERS ama NUS AH waa yaabee!!!.
B) In la abuuro guddi xalaal ah oo lagu magacaabaayoo: GUDDIGA DIFAACA XUQUUQDA SHACBIGA QOOWMIYADDA BANAADIRI, taasoo lagu gaari karo in aannu isku mowqif ahaano, codkeenuna uu ahaado hal kaliya, inaan ka qeeybgalno fadhi kasto la qabanaayo ee kusaabsan dib u dhiska dowladda Soomaaliya iyo dib u heshiisinta khilaafaadka ka taagan dowladda ku meel gaar ah iyo beelaha ka soo hor’jeeda oo annaga ka mid nahay ;
T) si loo dhiso guddigaasi waxaan soo jeedinayaa in guddiyaasha ururadeena inooga dhisan dowladaha caalamka in ay soo magacaawdaan 2/3 qof si aan go’aan uga gaarno meeshii isku imaan laheeyn anigoo talo ahaan u soo jeedinaayo magaalada Genève ee waddanka Iswiiska.
J) ka qeybgalkeeynu shirarka la qabanaayo ee arrimaha dowladda Soomaaliya in doodeenu uu ahaado sidii aan ku soo cesha laheeyn xuquuqdeena iyo dhulkeenaba ” XUQUUQ IYO DHUL DHIMANAAYO WAA LOO DHINTAA ”
Comment by somaliamomentum on September 27, 2012 2:26 pm
Si is-beddelka taariikhiga ah u dhameystirmo waxaa loo baahanyahay in Ra’iisul Wasaaraha cusub laga dhigo qof “u dhashay” Reer Banaadir – dadka loo yaqaan – Asligii.
Si waxaan oo wada cusub loo soo dhoweeyay, ayaa loo soo dhoweyn lahay Ra’iisul Wasaare oo laga magacaabo qowmiyadda Reer Banaadir.
Iyagoo ay iga mudan yihiin ixtiraam iyo sharaf weyn, waxay ila tahay, iyadoo la dar-yeelaayo danta guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed, oo xaqana ay wada gaarto dhammaan Soomaalida in markaan mansabka ama xilka Ra’iisul Wasaaraha aan loo dhiibin qof ka mid ah dadkii horey u soo qabtay. Waa hubaal haddii qof Reer Banaadir ah lagu aamino hawshaas in si habsami ah uu u gudan doono waajibkiisa qaran dalkana ku maamuli doono sinnaan iyo cadaalad.
Lixdan sano ku dhowaad ayaa laga joogaa inta aan sheeganayno dawladnimo. Ma jiraan, haba yaraatee, wax lagu amaani karo dadkii ilaa hadda dalka soo maamulay? Sababaha waxay u badan yihiin in dadka loo magacaabay Ra’iisul Wasare aysan lahayn awood uu xitaa booqasho hawleed ugu tago meelo ka mid ah dalka gudahiisa iyadoo loo aaneynaayo xiriirka ka dhexeeyo qabiilkiisa iyo qabaa’ilka deggan meelaha kale oo aan fiicneen.
Reer Baanaadir waa wadani, waa daacad iyo in uu wax dhiso ma ahee, wax ma dumiyo. Soomaalida kale cid aan lagu dayin hawshaas ma jiraan ilaa hadda oo waxii ay dalka u soo qabteen natiijadiisa ma qarsana, micnaa waa “Eber” ama “Zero”.
Dhanka nabaddana, Reer Banaadir cid ay cadaw la yihiin ama col ka yihiin ma jiraan. Sidaas darteed, madaama uu qof kasta wada hadal la yeelan karo Ra’iisul Wasaare reer Banaadir ah sida ugu sahlan ayuu u keeni karaa nabadda uu shacabweynaha Soomaaliya u baahanyahay si uu noolashiisa u hor-mariyo iyo ilmahiisa u korsado.
Madaama uu dalkenna maraayo duruufo adag, suurto gal ma aha in hoggaanka uu ku dhex wareego isla dadkii lixdan sano wax natiijo wax-ku-ool ah ummadda tusi waayay.
Waxaan Mudane Madaxweyne Xasan Shaikh Maxamuud u soo jeedinaayaa in uu siiyo tixgelin gaar ah fikraddaan ah in uu Ra’iisul Wasaaraha cusub ka dhigo qof Reer Banaadir u dhashay. Waa hubaal in 100% qaranka Soomaaliyeed, gaar ahaan wakiiladooda ku jira Baarlamaanka ay gacmo furan ku soo dhoweynaayaan go’aan noocaan ah oo noqon doono mid taariikhi ah.
Waxaan rajeynaa in boggaan cusub oo bilawday 10kii Sebtember 2012 uusan noqon boggii kowaad ee 20ka sano soo socda oo sida kuwii hore oo burbur ma ahee aan barwaaqo u keenin dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Laga soo bilaabo 1949 waxaa ii soo baxay in 20 sano walba ama ku dhowaad, in dalka lala degay oo dumis ma ahee aan daryeel dhicin: 1950-1969 (19 sano) siyaasadda Soomaaliyeed waxaa faraha ku haayay AFIS/SYL. Laga soo bilaabo 1969-1991 (22 sano) Maamulkii Military ayaa gacanta ku haayay. Sannadahii 1991-2012 (21 sano) Dagaal Oogeyaal iyo Dawlado kmg ayaa soo haayay.
Bishaan Sebtember 12, 2012, waxaa bilawday 20kii sano oo magaca iyo sumcadda Soomaaliyeed dib loogu soo celin lahay, haddii Shacabka Soomaaliyeed uu helo hoggaan wax garad ah oo ugu shaqeeyo si haggar la’aan. Madaxweynaha cusub Mudane Xasan Shaikh Maxamuud waa in uu noqdaa nin geesi ah oo u daneenayno ummadda iyo dalka Soomaaliyeed si ay gaaraan bash-bash iyo barwaaqo asiga oo miiska soo saaraayo Card-ka aan weli la isticmaalin oo ah in uu Magacaabo Ra’iisil Wasaare oo Reer Banaadir u dhashay.
Maxaad ka taqanaa Shaqsiyaadka ugu awooda badan xiligan ee ku hareereysan Madaxweynaha Somaliya Who is Advising the New Somali President?